Social Media မှာ Cover Image တွေအသုံးဝင်နိုင်မယ့် Tips အချို့ -
Social Media ပေါ်မှာကိုယ့် သတိမထားမိတဲ့ အချက်လေးတွေက အရမ်းကို အရေးပါနေတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ Business လုပ်ငန်းတွေကို Social Media နဲ့တွဲပြီးလုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ Business အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ Cover Image က ဘယ်လောက်အရေးပါဝင်သလဲ? Cover Image ကဘာတွေအကျိုးအမြတ်ရမှာ? ဒီ Cover Image တွေဟာ Business လုပ်ငန်း မဟုတ်ပဲ သာမန် User တွေမှာတောင် ဒီ Cover Image ကတော်တေ်ာ စကားပြောပါတယ်။ User တွေဟာ သင့်ရဲ့ Social Media Profile ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးတွေမှာက Profile နဲ့ Cover Image ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သင့်ရဲ့ Profile အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Cover Image ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိနဲ့လူစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ Cover Image သုံးထားတဲ့ User နဲ့ သိပ်ပြီးအဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ Cover Image သုံးထားတဲ့ User ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ Cover Image သုံးထားတဲ့ User က ပိုပြီး Engagement ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ လည်း Cover Image က လုပ်ငန်းရဲ့ Image နဲ့ Engagement ကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။
Social Media ပေါ်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းအများအပြားမှာ Cover Image ကိုမှားယွင်းစွာသုံးမိခြင်း၊ လိုအပ်ထက် Size ထက်ပိုပြီးသုံးမိခြင်းအစရှိတဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Cover Image ကိုဂရုတစိုက်နဲ့ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ Cover Image သုံးမယ်ဆိုရင် အသုံးဝင်နိုင်မယ့် Tip လေးအချို့ကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်…
– သင့်ရဲ့ Cover Image ဆိုတာသင့်အတွက် Virtual Shop Window တစ်ခုလိုတွေးပြီးဖန်တီးပါ။
– မြင်သူတိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို တက်ကြွနိုးထလာအောင်ဖန်တီးပါ။
– Cover Image Size ကို တိကျတဲ့ အချိုးနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါ။
– Story ပြောပြတဲ့ Cover ပုံစံပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ( Audience တွေဟာ Story Telling ကိုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်)
အထက်ပါ အချက်တွေကို သတိထားပြီး Social Media ပေါ်မှာ Business သေချာလုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် Cover Image ဟာလည်းအရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြစ်သလိုမပြုလုပ်ပဲ၊ သေချာဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အကြံပြုပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Saturday June 5th, 2021/ Blog/0Comment